Monte-Carlo Bay Hotel & Resort mitokona volamena
Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Monte-Carlo Bay Hotel & Resort mitokona volamena
Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Monaco • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Jolay 6, 2018
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort dia iray amin'ireo hotely voalohany tao amin'ny Principality nahazo mari-pahaizana momba ny tontolo iainana Green Globe tamin'ny 2014.
Ny Monte-Carlo Bay Hotel & Resort dia mpisava lalana mitarika amin'ny fampandrosoana maharitra ary iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny voalohany tao amin'ny Principality nahazo mari-pankasitrahana momba ny tontolo iainana Green Globe tamin'ny taona 2014. Vao tsy ela akory izay, nahazo mari-pankasitrahana volamena ny hotely ho fanekena ny fahavononany fanao maitso mandritra ny dimy taona misesy.
Green Globe's Gold standard dia ambaratonga henjana amin'ny fanamarinana, izay ny trano Hotel & Resort Bay-Monte Bay sy ny morontsiraka Monte-Carlo ihany no nahatratra hatramin'ny fotoan'ny Principality.
Andrimpanjakana mpisava lalana amin'ny fampandrosoana maharitra
Amin'ny maha hotely Green andevo an'ny Société des Bains de Mer., Ny hotely Monte-Carlo Bay Hotel & Resort dia nahazo mari-pankasitrahana Green Globe notokanana tamin'ny 23 aprily 2014. Ny fanoloran-tena mitohy amin'ny fananana amin'ny fomba fanao tsara indrindra dia nekena tamin'ny alàlan'ny fihazonana avo- fampisehoana ambaratonga araka ny takian'ilay marika iraisam-pirenena Green Globe ary tamin'ny volana Jona lasa teo, dia nahazo ny Gold Standard soa aman-tsara.
Frederic Darnet, Tale Jeneralin'ny Hotel & Resort Monte-Carlo Bay, dia niarahaba ireo ekipa rehetra ary nilaza fa, "Ity Green Globe Gold Certification ity dia tsy mifarana fa fanombohana ary tiako ny arahaba ny ekipan'i Bay Be Green noho io adidy isan'andro io. . Tokony hojerentsika ny fiatraikan'ny tontolo iainana, toekarena, indostrialy ary koa fiaraha-monina amin'ny hetsika ataontsika rehetra. ”
Ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia miverina amin'ny fiarahamonina
Ny ekipan'ny Monte-Carlo Bay Hotel & Resort's Bay Be Green, natsangana tamin'ny 2013, dia ekipa feno fanoloran-tena izay mandrindra hetsika ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy. Ny ekipa dia mandray anjara mavitrika amin'ny hetsika sosialy isan-karazany mandritra ny taona, mikarakara hetsika toy ny fiaraha-misakafo fiaraha-monina miaraka amin'ny Fourneau économique de Nice sy ny fikambanana Solidarpole izay nanomanan'i Chef Marcel Ravin sy ny ekipan'ny Bay Be Green sakafo atoandro ho an'ny olona sahirana 200 . Nanangona kilalao miaraka amin'ny SIVOM ho an'ny Restos du Cœur ihany koa ny ekipa, fikambanana mpanao asa soa frantsay izay ny asany lehibe indrindra dia ny fizarana fonosana sakafo sy sakafo mafana ho an'ireo sahirana.
Ankoatr'izay, ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia nandray anjara tamin'ny Run No finish Line ary nihazakazaka atrikasa fanentanana momba ny tontolo iainana ho an'ny ankizy ao amin'ny Monacology, tanàna fanabeazana iray herinandro ho an'ny ankizy avy amin'ny Principality sy ny tanàna manamorona. Tamin'ity taona ity, ny ekipan'ny Bay Be Green dia nisafidy lohahevitra momba ny fahasalamana sy fahasalamana izay nanambaran'ny ankizy siramamy miafina ao amin'ny sakafo tiany indrindra, ary nilalao hetsika abecedarium voankazo sy legioma.
Chef Marcel Ravin misy kintana sy be fanoloran-tena
Ny fampandrosoana maharitra dia fifantohana lehibe ao an-dakozia any an-toerana ihany koa noho ny Chef Marcel Ravin, chef manana kintana Michelin izay mampiroborobo ny tombontsoa amin'ny fambolena sy fihinanana sakafo tsara ary koa ny fandraisana andraikitra hiarovana ny planeta. Ny fahitany ny zava-drehetra dia manasongadina ireo dingana izay andalovan'ny sakafo avy amin'ny tany ka hatramin'ny lovia.
Ny Chef Marcel dia miara-miasa amin'i Jessica Sbaraglia sy ny orinasam-panombohany Terre de Monaco, izay mamorona zaridaina legioma an-tanàn-dehibe ao anatin'izany ny any amin'ny Bay Bay-Carlo. Ny fananana voankazo sy legioma amin'ny vanim-potoana, nojinjaina eo akaiky eo no zava-dehibe indrindra amin'ny Chef Marcel. Tao amin'ny trano fisakafoanana sonia an'i Monte-Carlo Bay, Blue Bay, ny vokatra dia nidina dingana vitsivitsy avy tao an-dakozia no eo afovoan'ny lovia rehetra. Ho fanampin'izany, tamin'ny taon-dasa ny trano fisakafoanana dia nanao sonia ny satan'i Mister Good Fish, izay mitanisa ireo karazan-karazan-taona arak'izany amin'ny fanajana ny harena an-dranomasina ao an-toerana.
Green Globe dia rafitra maharitra maharitra miorina amin'ny fenitra eken'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny asa maharitra sy ny fitantanana ny orinasan-fizahan-tany sy fizahan-tany. Miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana manerantany, Green Globe dia monina any California, Etazonia ary manana firenena 83 mahery. Green Globe dia mpikambana iray ao amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Raha mila fanazavana, tsidiho azafady greenglobe.com.